पिंकीको फरक लैङ्गीक पहिचानको लडाई
सिस्नु शहरी भान्साको पनि परिकार
सुमार्गीको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार
त्रिविलाई एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा लिन सर्वोच्चद्वारा बाटो खुला
‘आफनो काम गर्ने हो, अरुको चासो गर्ने फुर्सद छैन’
शुक्रबार र शनिवार ‘मनसुन फेशन परेड–३’ हुँदै
हुर्कदैं गर्दाका अवस्था र अनुभूति
२०३५ सालमा लम्जुङमा मेरो जन्म भएको हो । म जन्मेको एक बर्ष हुदैं थियो । एकबर्षको अन्तरालमा मेरा दुई दाजुहरु बित्नु भयो । बुवा नेपाल आर्मीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । बुबालाई दुई छोराहहरु गुमाउनु पर्दाको चोट थियो । हामी सानैछँदा बुवाले हजुरबुबा हजुरआमासँग लम्जुङ्ग नबस्ने निर्णय सुनाउनु भएछ । छोराहरु अकालमा मरे पछि बुबाले त्यस्तो निर्णय गर्नु परेको कुरा पछि सम्म पनि हजुर–आमाले सुनाउनु हुन्थ्यो ।
आफू जन्मे हुर्केको ठाउँ तर मनमा डर थियो । फेरी केही नराम्रो हुने हो कि भन्ने । त्यहि घटनाले बुबा काठमाडौं आउने निर्णयमा पुग्नु भयो । मेरो अध्ययन काठमाडौंमा सुरु भयो । अन्य साथीहरुको तुलनामा हामीहरु फरक हुन्छौं त्यसैले पनि उनीहरुले हामीलाई बहिस्कार गर्छन । शौचालय प्रयोग देखी लिएर अन्य कुराहरुमा सधै बिभेदको सिकारमा पर्नुपथ्यो । हाम्रो हाउभाउ, हाम्रो प्रस्तुतीकै कारण हामीहरु हिंसा खेप्न बाध्य हुन्थ्यौ । माध्यमिक तहसम्म पुग्दैं गर्दा मेरो प्रस्तुतीका कारण कतिपय अबस्थामा मैले गालि पनि खानु परेको छ । जव उमेर बढ्दै गयो म अरु भन्दा फरक पो रहेछु भन्ने भावहरु आउन थाल्यो । म मात्र होइन म जस्ता धेरै साथीले फरक हाउभाउ कै कारण समाजबाट तिरस्कृत हुनु परेको छ । म किन यस्तो भए ? किन सबैले मलाई राम्रो ब्यवहार गर्दैन्न भन्ने कुराले पिडा बोध हुन्थ्यो । मैले माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सिद्धी गणेश स्कुलबाट गरे । संगीतमा विशेष झुकाव थियो । रत्नराज्य क्याम्पसमा संगीत विषय लिएर अध्ययन गर्थे ।
कलेज पढ्दै गर्दा आफू जस्तै साथीसँगको भेटले हिम्मत जुटाउने प्रयास
दिपक जंगम सरले संगीत सिकाउनु हुन्थ्यो । कलेज आउदा जादा कहिलेकाही रत्नपार्क जान्थ्यौं । म भित्र पनि कहिले काही फरक भावनाहरु आउथे । रत्नपार्क आउने जाने क्रम बढ्न थाल्यो । तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी साथीहरु संगको भेट हुने क्रम बढ्दै थियो । म को हुँ ? म मा किन फरक अनुभूतिहरुको संचार भइरहेको छ भन्ने पहिचानको बोध नै हुन सकिरहेको थिएन । म मात्र होइन रहेछु म जस्ता धेरैं साथीहरु रहेछन । मलाई मात्र होइन यो समाजले म जस्ता अन्य धेरै साथीहरुलाई पनि बिभेदको नजर लगाउँदो रहेछ भन्ने बोध हुन थाल्यो । अधिकार र अभियान भन्ने कुरा शून्य जस्तै थियो । राज्यले यस विषयमा संबोधन गरेको थिएन । फरक पहिचान भएको ब्यक्तिहरु पनि छन है यो समाजमा भन्ने कसैलाई पनि खासै चासो थिएन । बाल्यकालमा त यो कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन । म जस्ता धेरैं साथीहरु आफ्ना समस्या र भोगाई आफै भित्र दवाएर बसनुपर्ने अवस्था थियो ।
विभेद र अपहेलनाको जातोमा पिसिनु पर्ने अवस्था
म आफ्नो पहिचानलाई लिएर दर्जनौं प्रशनहरुले घेरिन्थे तर घण्टौं महिनौसम्म पनि ती प्रश्नहरुको उत्तर भेटिदैंन्थ्यो । संचार माध्यहरु थिए तर मेरो फरक पहिचान र अनुभूतिका बारेमा एक शब्द पनि कतै नभेट्दा झनै पिडा हुन्थ्यो । म केटा हुँ तर मलाई उनीहरु नै किन मन पर्छ ? यो सबै किन मलाई हुन्छ भन्ने भावहरु मनमा आइरहन्थ्यो । जब ९ कक्षामा पढ्दै थिए । सबै साथीहरु आफ्ना कुराहरु एक अर्को संग बाड्थे । म जस्तै अर्को साथी भए पनि म मेरो कुराहरु सुनाउन पाउँथे भन्ने मनमा खड्किन्थ्यो । त्यतिबेलाको समयमा मैले मेरो अनुभूतिहरु सुनाउने कोही पनि नभेटदा नितान्त एक्लो महशुस गरे । आफ्नो मन भित्रका प्रशनहरु सबै उनुत्तरीत थिए । म एक्लो थिए ।
मानिसले मानिसलाई नै पशुको व्यवहार गर्दा मानसिक आघात हुने रहेछ । यस्तै विभेदले मनमा नराम्रा भावको जन्म पनि हुन्थ्यो तर विस्तारै आफ्नो मनलाई संहाल्दैं संघर्ष गर्नु पर्छ भन्ने भाव र आशाको मसिनो घक्रोले जीवनलाई पुन सामान्य बन्न धक्धक्याउथ्यो । कयौं पटक जिवनबारे गलत निर्णय पनि लिन पुगे ।
जब एस.एल.सी पास गरे । मेरो विवाह फूपुको छोरीसंग गर्न भन्ने कुरा बच्चा हुँदै सुनेको थिए । जुन कुराले मलाई तनाव भयो । यो कुराबाट मैले कसरी मुक्ति पाउने भनेर गुम्बामा पनि गए । अबस्था बिग्रदैं गयो । बेला बेलामा बेहोस भए । यो सबै समस्याबाट कसरी मुक्ती पाउन सक्छु भन्ने प्रशनले धेरीए । विभिन्न ध्यान, योग साधनाहरु गर्न थाले । आध्यात्मीक ज्ञानले जिवन जिउन सहज भएको महशुस गर्दै गए ।
भारतिय चलचित्रहरुमा फरक लैङ्गीक पहिचानका पात्रलाई हाँसोका रुपमा चित्रर्ण गरेको दृश्यले हामीलाई दु.खी तुल्याउथ्यो । हामी जस्ता साथीहरु समुहमा भेला हुदाँ बटुवाले हामी माथी हासी मजाक गरेको कुराले झनै पिडा हुन्थ्यो ।
संगठित हुँदा चुनौती, जेल जानुपर्ने डर
२००१ साल पछि सुनिलबाबु पन्त संग मेरो भेट भयो । रत्नपार्क हाम्रो भेला हुने ठाउँ थियो । एक्लापनले दैनिकी जटील थियो । हाम्रो बोलिचाली र व्यवहारमा बाटुवाले अनेक लान्छनाहरु लगाउदा सुनेपनि नसुने झै गर्दै आफ्नो बाटो लाग्थ्यौं । फरक लैङ्गीक पहिचान भएका आफूजस्तै साथीहरु संग भेटघाट हुन थालेपछि मन हल्का हुन्थ्यो । एक दिन हाम्रो भेला थियो । सुनिल जीले त्यसको नेतृत्व गर्नु भयो । ‘अब हामी संगठीत भएर हाम्रो आवज बुलन्द बनाउनु पर्छ’ । उहाँको कुराले हाम्रो आत्मबल बढ्यो । सन २००१ मा सस्था सुरु भयो ब्लयु डाइमन्ड सोसाइटी । ‘समलिङ्गीको पक्षमा कानुन बन्न सकेको छैन अब यसका पक्षमा आमीले काम गर्न हो । जेल जानुपर्ने पनि हुन सक्छ तर हामी एक हुनपर्छ’ सुनिल जीको यहि भनाईले संगठीत हुने हिम्मत बटुलेर अघी बढेका थियौ. ।
टेलिभिजन कार्यक्रम ‘संघर्ष’ मा आफ्ना भोगाईहरु प्रस्तुत गर्न सुनील जी ले अनुरोध गर्नुभयो । सन् २००३ तिरको कुरा थियो । त्यो कार्यक्रममा जानु भन्दा पहिले पनि आफ्ना कुराहरु टेलिभिजनमा बोलेको थिए तर पूर्णरुपमा मेरो अनुहार देखाउन मन लागेन । समाजले मेरो पहिचानका बारे प्रशन गर्छ । मेरो घर परिवारमा कस्तो असर पर्ला भन्ने भय मनमा थियो । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम ‘संघर्ष’ अन्तर्वाता दिए । अनुहार नचिनीने बनाइएको थियो । मनका कुरा लुकाएर राख्दा झनै पिडा हुन्छ अब सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हिम्मत मलाई समुहले नै दिएको हो । टेलिभिजनको कार्यक्रम हेरेपछि मेरो दिदीहरुले मेरो आवाजबाटै मलाई चिन्नु भयो । अब के गर्न घर परिवारमा के भन्ने डर थियो ? दिदीहरुले मेरो बारेमा थाहा पाउनु भयो । मैले धेरै कुरा बोल्नु उचित देखिन । म मेरो बाटो लागे ।
सन २००८ बाट भने मैल मेरो पहिचान लुकाउन आवश्यक देखिन । अब बोल्नु पर्छ । सत्य तथ्य उजागर गर्ने डराउनु हुदैंन भन्ने लाग्न थाल्यो । पुरुषको लुगा लगाउनु भनेको घरको लागि बर्तबन्धको बातावरण बनाउनु जस्तै थियो । जुन कुरा मेरो मनले चाहदैन्थ्यो । परिवारले त्यसमै दवाव दिइरहेको थियो । उमेर बढ्दै गरेको छोरोको बर्तबन्ध र विवाह गर्न दवाव चौतर्फी थियो । जुन कुरामा म खुसी हुन सकिन्न ।